२०७८ असाेज १४ गते, बिहीवारको राशीफल, सिंह राशीको आज मिहिनेत गर्दा आम्दानीका स्रोत फेला पर्ने - Nepal Daily
२०७८ असाेज १४ गते, बिहीवारको राशीफल, सिंह राशीको आज मिहिनेत गर्दा आम्दानीका स्रोत फेला पर्ने
विहीबार, १४ असोज २०७८, ०७ : ५० मा प्रकाशित
२०७८ असाेज १४ गते, बिहीवार, ३० सेप्टेम्बर २०२१। आश्विन कृष्णपक्ष नवमी तिथि, १८ः३३ बजेदेखि दशमी। पुनर्वशु नक्षत्र। चन्द्रराशि– मिथुन, १६ः४९ बजेदेखि कर्कट।
तपाईं आज ऊर्जाले पूर्ण हुनुहुनेछ र असाधारण कुरा गर्नुहुनेछ। परिवारको भेलामा तपाईं सबैको केन्द्रविन्दु हुनुहुनेछ। तपाईंको प्रियबाट कामको दबाव परेर तपाईंको मन खिन्न भएको बेलामा पनि धेरै रोमान्टिक खुशी पाउनुहुनेछ। आज तपाईंलाई काममा राम्रो समाचार प्राप्त हुन सक्छ। यो तपाईंका जीवनसाथीसँग रोमान्स गर्ने राम्रो दिन हो।
आराम गर्नको लागि घनिष्ठ मित्रहरूसँग केहि समय बिताउनुहोस्। यो एउटा अर्को धेरै ऊर्जा प्रदान गर्ने दिन हो र अनपेक्षित लाभ हुने सम्भावना छ। परिवारको तनाउले तपाईंको ध्यान नबाँडियोस्। नराम्रो समयले हामीलाई धेरै सिकाउँछ। प्रेममा निराशा हुन सक्छ तर मन नमार्नुहोस् किनभने प्रेमीहरू जहिल्यै चापलूस हुन्छ्न। तपाईं आफ्नो जीवनसाथीको बकबकले झर्किन सक्नु हुनेछ ( तर उनले तपाईंको लागि साँच्चै नै महान कार्य गर्नेछन्।
तपाईं दीर्घ रोगबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको हँसिलो प्रकृतिले वरिपरिको वातावरण उज्यालो पार्नेछ। आज समय, काम, पैसा, साथीभाइ, परिवार, आफन्तस सबै एक पक्षमा र आफ्नो साथीसँग तपाईं अन्य पक्षमा, सबै एक(अर्कामा हुनेछन्। तपाईंले सधैं नै गर्न चाहेको काम आज कार्यालयमा गर्न पाउन सक्नु हुनेछ। तपाईंको विवाहले यस दिन सुन्दर मोड लिनेछ।
आर्थिक स्थिति र वित्तीय समस्या भने तनाउको कारण बन्नेछन्। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। तपाईंको घरेलू दृश्य केहि अप्रत्याशित हुनेछ। अचानक आएको रूमानी हावाले तपाईंको आत्मालाई उँभो उठाउनेछ। तपाईंको रचनात्मक कार्यले तपाईंका वरिपरिका मानिसहरूलाई विस्मित पार्नेछ र तपाईंलाई धेरै प्रशंसा दिएर जीत गराउनेछ। तपाईंको जोडीले आफ्नो मनको कुरा सुन्न प्रशस्त समय दिनेछन्।
अत्यधिक प्रभावशाली मान्छेको सहायताले तपाईंको नैतिकतामा ठूलो बढावा दिन्छ। अस्थायी ऋणका लागि तपाईंसँग भेट गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। आफ्नो हँसिलो प्रकृतिले सामाजिक जमघटमा तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउनेछ। यस दिनलाई एउटा विशेष दिन बनाउन थोरै प्रेम र दया दिनुहोस्। आज भन्दा अघि विवाह कहिल्यै यति सुन्दर भएको थिएन।
आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ। दिनको उत्तरार्द्धमा तपाईं आराम गर्न र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग समय बिताउन चाहनुहुन्छ। आफ्नो बोलीको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईंका कठोर शब्दले अशान्ति फैलाउँछ र आफ्नी प्रियतमासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। तपाईंले कठिन जस्ता देखिने समस्याहरूको हल गर्न आफ्ना सम्पर्कमा भएका मान्छेहरूको प्रयोग गर्न आवश्यक छ। आफ्नो जोडीको मागले तपाईंलाई केही तनाउ दिन सक्छ।
२०७८ असाेज १३ गते, बुधवारको राशीफल, मिथुन राशीको आज नयाँ कामको प्रस्ताव आउने
आज असाेज १२ गते, मंगलवारको राशीफल, मिथुन राशीको बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट
२०७८ असाेज ११ गते, सोमवारको राशीफल, मीन राशीको मनमा शान्ति हुनेछैन।
तपाईंको आजको दिन कसरी बित्दैछ ? पढ्नुहोस् राशिफल
तपाईंको आजको दिन कसरी बित्छ ? पढ्नुहोस् राशिफल